Buugga Yavuz Sultan Selim | RayHaber
HomeYavuz Sultan Selim Bridge
3 wuxuu ku soo beegmayaa dhamaadka Wadada Waqooyiga Marmara si loo yareeyo Gaadiidka Gobolka
Xiriirinta labada qaaradood si ay u bixiyaan gargaarka weyn ee gaadiidka iyo magac u yeelata dhismayaasha u gaarka ah adduunka oo badanaa lagu xuso Wadada Waqooyiga Marmara ayaa soo gabagabeynaya. Bilihii dhawaa waa hubaal [More ...]
Guusha Abaalmarinta Caalamiga ah ee Mashaariicda waaweyn; Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa ku guuleysatay nambooyin fara badan laga soo bilaabo marxaladda naqshadeynta illaa iyo hadda iyada oo la marayo Wadada Eurasia Tunnel, oo loo arko inay tahay mid ka mid ah mashaariicda injineernimada adduunka ugu guusha badan. [More ...]
365 kun oo rakaab ah maalinti laga bilaabo Marmaray, 15 kun oo gawaarida maalin walba laga soo qaado Buundada Martyrs Wasiirka Turhan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Kuliyada Sharciga ee Jaamacadda Haliç Xarunta Hoolka Shirarka ee ay abaabushay “Magaalada iyo [More ...]
Wadada weyn ee Sivas-Ankara ee ku taal goobta tareenka xawaaraha sare ku yaal ee ku taal meesha ay ku taal Köklüce ayaa la kulantay masuuliyiinta shirkadda Turhan, suxufiyiin halkaan jooga, tareenka xawaare sare ku socda, ayaa sameeyay bayaanno ku saabsan shaqada. Wasiirka Turhan, Mashruuca Lineka Ankara-Sivas HHT [More ...]
3 Floor Tunnel Large Istanbul mashaariic ahee Turkey ayaa soo bixi doonaa in ugu dhakhsaha badan wax qandaraas ah. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa yidhi, yerli Shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyeba waxay muujinayaan xiisaha weyn ee mashruuca aan ku talagalnay in aan kula samayno deyn dibadeed. [More ...]
Waxaan soo uruurinay maalgashiyadii ugu caansanaa ee maalgashiga Shiinaha ee dalal badan oo ka dhex jira mashruuca Belt Road. [More ...]
Ku-xigeenka CHP Istanbul Istanbul Mudane Ad Istanbulgüzel, Xarunta Xiriirka Madaxweynaha (CIMER) Yavuz Sultan Selim Bridge oo ku saabsan dalabka shacabka ayaa la wadaagay jawaabta dalabka. Marka loo eego macluumaadka ay heshay Adıgüzel YSS Bridge celcelis ahaan maalin walba 1 milyan [More ...]
Maamulka Kocaeli, Waqooyiga Marmara Dhagaxyada Wadada Weyn ee la furay si loogu isticmaalo qaybta ganacsiga ee Kocaeli maaha ujeedooyin ganacsi, ayaa shaaca ka qaaday in laysankaaga la baabi'in doono marka la dhamaystiro wadada weyn. Wadada isku xirta Istanbul-Kocaeli iyo Sakarya ayaa la filayaa inay si raaxo leh u helaan, labo [More ...]
Waxaa la sheegay in gawaadhi gaaraya 2016 milyan ay ka gudbeen Buundada Cusgaani sanadki 2019 sanadki, oo daboolaya July 3 iyo Juun 22. 14 milyan 600 kun sanadkii sanadki buundada (3 million 43 million 800 kun sanadkii) [More ...]